Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 12th 2018 | MINYENGETERO MARI
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 12th 2018
Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri nhasi kunobva mubhuku raEstere 5: 1-14 naEstere 6: 1-14. Verenga uve wakaropafadzwa.
Esiteri 5: 1-14:
1 Zvino nezuva retatu Esiteri akafuka nguo dzake dzoushe, akamira paruvanze rwomukati rweimba yamambo, pakatarisana neimba yamambo, mambo akagara pachigaro chake choushe paimba yamambo, nepasuo reimba. 2 Zvino mambo wakati achiona vahosi Esiteri amire paruvanze, iye akanzwirwa tsitsi naye, mambo akatambanudzira Esiteri tsvimbo yendarama yakanga iri mumaoko ake. Ipapo Esiteri akaswedera, akabata iyo tsvimbo. 3 Ipapo mambo akati kwaari, Unodeiko, vahosi Esiteri? Uye chii chaunokumbira? iwe uchapihwa kusvika kune hafu yeushe. 4 Esiteri akapindura akati, Kana zvakanaka kuna mambo, mambo naHamani ngavauye nhasi kumafundo andakamugadzirira. 5 Ipapo mambo akati, Hamani ngaachimbidzike, kuti aite sezvakarehwa naEsteri. Saka mambo naHamani vakasvika kumafundo akanga agadzirwa naEsiteri. 6 Ipapo mambo akati kuna Esiteri pamafundo ewaini, Chinyiko chaunonyorera? uye uchazvipiwa, uye chii chaunokumbira? kunyange huchisimbisa paushe, uchaitwa. 7 Ipapo Esiteri akapindura, akati, Chikumbiro changu uye chikumbiro changu, ndizvozvo. Kana ndichinge ndawana nyasha pamberi pamambo, uye kana mambo achifara nazvo kuti andipe chikumbiro changu, nokuita chikumbiro changu, mambo naHamani ngavauye kumafundo andichavagadzirira, ndichaita mangwana sezvarehwa namambo. 8 Naizvozvo Hamani akabuda nezuva iro achifara, ano moyo unofara; asi Hamani akati achiona Modhekai pasuwo ramambo, kuti haana kusimuka, kana kumutsamwira, akatsamwira Modhekai. 9 Asi Hamani akazvidzora, akati achisvika kumba, akatuma vanhu kundodana shamwari, naZereshi mukadzi wake. 10 Hamani akavaudza nezvekubwinya kwefuma yake, nehuwandu hwevana vake, uye nezvese zvinhu zvaakange achimukurudzira kuna mambo, uye nekumukwidza kwake pamusoro pemachinda nevashandi vamambo. Hamani akatiwo, "Navahosi Esiteri haana kutendera munhu kupinda namambo kumafundo aakanga agadzira, asi ini ndoga; Mangwana ndakadamwa kwaari pamwe chete namambo. 11 Asi izvi zvose hazvindibetseri chinhu, kana ndichingoona Modhekai muJudha agere pasuwo ramambo. 12 Ipapo mukadzi wake Zereshi akati, shamwari dzake dzose, kwaari, "Torai jira rinofanira kuva makubhiti makumi mashanu pakureba, mangwana mangwana mutaure namambo, kuti Modhekai asungirirwe ipapo, ipapo muchaenda namambo kundoita zvakanaka. Chinhu ichi chakafadza Hamani; uye akaita kuti matanda agadzirwa.
Esiteri 6: 1-14:
1 Zvino nousiku uhwo mambo akashaiwa hope, akaraira kuti vauye nebhuku renhoroondo yamakona. Vakaverengerwa pamberi pamambo. 2 Uye zvakawanikwa zvakanyorwa kuti Modhekai akadeedzera nezveBhigitani naTereshi, vaviri vavatariri vamambo, vachengeti vemukova, vakatsvaka kubata mambo Ahashivheroshi. 3 Ipapo mambo akati, "Modhekai akakudzwa nokukudzwai pamusoro pechinhu ichi? Ipapo varanda vamambo vaimubatira, vakati, Hakuna chinhu chaakaitirwa. 4 Ipapo mambo akati, "Ndianiko paruvanze?" Zvino Hamani akanga apinda paruvanze rwokunze rweimba yamambo, kuzotaura namambo kuti vasungirire Modhekai pamatanda aakanga amugadzirira. 5 Varanda vamambo vakati kwaari, "Hamani umire paruvanze. Mambo akati, "Ngaapinde." 6 Naizvozvo Hamani akapinda. "Ipapo mambo akati kwaari," Chii chingaitwe kuna murume anofarirwa namambo kukudza? " Zvino Hamani akafunga mumoyo make, achiti, Mambo angafarira kukudza aniko kupfuura ini? 7 Hamani akapindura mambo, akati, "Anoda kukudzwa namambo," Mambo ngaatorerwe nguo dzepamberi, uye bhiza rinofamba namambo, nekorona yakaiswa pamusoro wake. 8 Zvino ngavatore iyi nguo nebhiza paruoko rwemumwe wemachinda akanaka kwazvo amambo, kuti vagadzire murume uyo mambo waanoda kukudza, vamuise nemabhiza, panzira yemuguta, vazivise, pamberi pake, Izvi zvichaitirwa murume unofarirwa namambo kukudza. 9 Ipapo mambo akati kuna Hamani, "Kurumidza, utore nguo, nebhiza, sezvawataura, undoitira Modhekai muJudha, iye ugere pasuwo ramambo, usarega chero chinhu chawataura. Ipapo akatora Hamani nenguvo, akagadzirira Modhekai, akaenda naye akatasva bhiza munzira yomuguta, akazivisa pamberi pake, achiti, "Izvi zvichaitirwa murume uyo mambo waanofarira kukudza. 10 Modhekai akadzokazve kusuwo ramambo. Asi Hamani akakurumidza kuenda kumba kwake achichema, akafukidza musoro wake. 11 Zvino Hamani akaudza Zereshi mukadzi wake neshamwari dzake dzose zvose zvaakaitirwa. Ipapo vachenjeri vake naZereshi mukadzi wake vakati kwaari, Kana Modhekai ari worudzi rwevaJudha, iye watakatanga kuwa pamberi pake, haungamukunda, asi uchawa pamberi pake. 12 Zvino vachiri kutaura naye, varanda vamambo, vakaenda, vakachimbidzika kuenda naHamani kumafundo akanga agadzirwa naEsiteri.
Previous nyayaZuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 11th 2018
inoteveraZuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 13th 2018
Maminitsi makumi matatu Eminamato Yekunakirwa Uye Nyasha